ikhaya STARS STARS I-Bukayo Saka Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Bukayo Saka Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold. Ityala kwiArsenal FC
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGlaus Genius eyaziwayo ngegama lesidlaliso "USakinho". Ibali lethu leBukayo Saka yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukusuka ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokunyuka kweBukayo Saka. Ityala kwi Ilanga kunye neNettheroy
Ewe, wonke umntu uyambona njengalo winger ojonga ubuso bomntwana onethemba elikhulu lebhola. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biology ka-Bukayo Saka enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
I-Bukayo Saka yabantwana Ibali leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNgokuhlwa- Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
UBukayo Saka wazalwa kwi Umhla we-5th kaSeptemba 2001 kubazali baseNigeria kwisixeko saseLondon, e-United Kingdom. Abazali bakhe bangabafuduki baseNigeria abathi ngaphambi kokuba azalwe bashiye eNigeria bayohlala eLondon bekhangela impilo engcono kunye namathuba angakumbi abantwana babo abangazalanga.
Ekuzalweni kwakhe, abazali bakhe kwathiwa "Bukayo"Ligama elingu-unisex elithetha ukuthi"Yongeza kulonwabo ”. Bukayo ligama elisetyenziswa rhoqo kwisizwe saseYoruba kumazantsi mpuma eNigeria. Oku kuthetha ukuba iBusayo Saka inosapho lwayo oluvela kwiNoruba yeqela laseNigeria.
US Saka ukhule kwidolophu elikomkhulu lase-London eLondon kumgangatho ophantsi wohlobo losapho olukumgangatho ophantsi. Uyise nonina babefana nabaninzi abafudukayo baseNigeria Awunayo imfundo efanelekileyo yezemali kodwa wenza imisebenzi ephantsi kwaye amaxesha amaninzi wayefumana ubunzima kwimali yokunyamekela iimfuno zosapho e-UK kunye naseNigeria.
I-Bukayo Saka yabantwana Ibali leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNgokuhlwa- IMfundo kunye neMfundo eSakholwayo
Kanye njengabaninzi baseNigeria eLondon, amalungu osapho lukaBukayo Saka ayenomdla webhola. Yayiluthando lwabo ngebhola kunye nomnqweno ongapheliyo wokuphakamisa umgangatho wabo wokuphila okhokelela ekuqwalaselweni kukaBukayo kwimfundo yebhola eLondon.
HUkunceda abazali abathanda ibhola ekhatywayo ababexhasa iArsenal, kungokwemvelo ukuba uBukayo omncinci agxile kwingqondo yakhe ekwenzeni iklabhu yezemidlalo. Yayingutata kaBukayo Saka othathe uxanduva lokuqinisekisa ukuba unyana wakhe uhlala emgangathweni kwaye ezithobile kumnqweno wakhe wokufumana uvavanyo oluyimpumelelo. Ngamazwi kaBukayo;
'Utata wam wayengumthombo omkhulu kum. Ukusukela ndisemncinci, ebesoloko endigcina '
Isicelo sesifundo sebhola ekhatywayo yeArsenal sasikhona kuphela sabafundi abanetalente yokwenene. Kuba abazali bakhe bebesazi ukuba uBukayo unento eyenzekayo, abathandabuzi ukufaka isicelo. Ngombulelo weArsenal academy eyabizwa kwaye yangqina ukuba kufanelekile, ukudlula izilingo zabo. Ngeli xesha, ikratshi labazali bakhe kunye namalungu osapho babengayazi imida.
I-Bukayo Saka yabantwana Ibali leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNgokuhlwa- Ubomi bokuqala
U-Saka waqala umsebenzi wakhe indlu yezixhobo zemfazwe'IHale End yokufunda ayilula ngoku njengoko yayigcwalisiwe ngamadini amaninzi kuye nakubazali bakhe. Ngamazwi akhe;
"Bekulilize kakhulu ukuba abazali bam bandincedise ukuza apha kodwa bahlala benikela konke kwaye bandiqeqesha"
Lo mzabalazo wanika uS Saka izizathu ezininzi zokumnceda ukuba asebenze nzima ngalo lonke ixesha kwaye aqiniseke ukuba unika konke okusemandleni akhe. Njengabalingane bakhe, uSokho wakhetha isithixo. Ngelixa abanye behamba kunye Thierry Henry, Dennis Bergkamp, njl njl, wakhetha ibali laseSweden nelaseArsenal, uFreddie Ljungberg owayesengumqeqeshi wolutsha kwiklabhu.
UFreddie Ljungberg wanceda uBukayo Saka ukuba abe yile nto ayikho namhlanje. Ityala elinomfanekiso Football365
Njengomdlali we-U15 academy player, uFreddie Ljungberg wanika iBukayo Saka elona cebiso lilungileyo. Wanceda uS Saka ukuhlala ethobekile kwaye esebenza nzima njengoko wayekholelwa ukuba inkwenkwana yayingenalo ixesha lokuba ngumdlali ophambili.
I-Bukayo Saka yabantwana Ibali leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNgokuhlwa- Indlela eya kwiNdaba ibali
Yonke into uFreddie Ljungberg waxela kwangaphambili ngaye yenzeka. Njengoko uSuero wajika iminyaka eyi-17, wanikwa ikhontrakthi yobuchule yiArsenal kwaye wanyuselwa kwicala eliphantsi kwe23. Kwakhona, emva kongcelele lomdlalo omangalisayo, uSokho wabizwa kwiqela eliphambili leklabhu.
Xa wayekunye neqela eliphambili, waqala wakhangela ithuba kumdlalo wokukhuphisa umsebenzi wakhe kwaye walwa nokhuphiswano. Ukuthetha ngokhuphiswano, ukulahla uAlex Iwobi kunye no Aaron Ramsey Olo yayilucelomngeni olukhulu ngakumbi kuneqabane elalifunda naye UReiss uNelson. Indawo ebekulindelwe ukuba iguqulwe kuqala yafika kwi-2018 / 2019 I-Europa League Final apho uSahla wokuqala washiya amanqaku akhe ngokusebenza kakuhle.
I-Bukayo Saka yabantwana Ibali leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNgokuhlwa- Ukunyuka Kwidumo Ibali
Ukuphela kwexesha le-2018 / 2019 isithuba sobabini Aaron Ramsey kwaye Alex Iwobi ukushiya iArsenal yeJuve kunye ne-Everton ngokwahlukeneyo. Oku kunike u-Bukayo igumbi ukuba abe nokhuphiswano olungaphantsi, umntu omnye okwi-cadre yakhe ukukhuphisana nendawo yephiko lasekhohlo.
Nge-19 kaSeptemba 2019 wabona uBukayo Saka enomda kuleyimbambano phakathi kwakhe noReiss Nelson. Ubusazi?… Ngalo mhla, akazange afumane amanqaku kuphela, wabonelela ngama-assistors amabini athandekayo njengoko i-Arsenal iphumelele i-3-0 ngokuchasene no-Eintracht Frankfurt kumdlalo wabo weqela wokuvula we-2019-20 UEFA Europa League. Apha ngezantsi kukho isiqwenga sobungqina bevidiyo.
Xa u-Bukayo Saka ezalisekisa iphupha lakhe lobuntwana lokufumana amanqaku akhe okuqala e-Arsenal, wanika utata wakhe ngokukhawuleza umnxeba weTowTime. "Andikwazanga ukuthetha naye kuba abaqeqeshi bafuna ukuba ndingene kwindawo yokuhlamba umkhenkce ukuze ndibuye ngokukhawuleza emva komdlalo. Sibeka nje izithupha zethu komnye komnye" Uthe.
Endaweni yokuqunjelwa sisiqalo esiqhelekileyo, i-winger-left yasuka kumandla iya kumandla. At Iminyaka ye-18 kunye ne-125 kwiintsuku ubudala, uSaha waba ngumdlali omncinci weqela eliphambili kwiAustralia kwimbali yePremier League ukuqala komlo we-Man Utd vs Arsenal. Uye wamangaza abalandeli kumdlalo ngokususa kwiindawo Ashley Young.
Ngexesha lokubhalwa, uBukayo Saka ubonwa ngabalandeli abaninzi njengesithembiso esilandelayo esihle kwisizukulwane samaphiko asekhohlo e-Arsenal emva kukaFreddie Ljungberg. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Bukayo Saka yabantwana Ibali leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNgokuhlwa- Ulwalamano lobomi
Ngokuphumelela kunye nokunyukela kwiimfuno ezinkulu zebhola yesiNgesi, kuqinisekile ukuba abalandeli abaninzi kufuneka babuze ukuba uBukayo Saka unentombi okanye umfazi. Ewe! ubuso bakhe obuhle bomntwana buhambisana nesitayile sakhe sokudlala ngokuqinisekileyo bumbeka phezulu kumfana oyintombazana.
Imibuzo ngemibuzo kwi-Bukayo Saka's Girl's Girl. Ityala kwi Sortitoutsi
Emva kophando oluninzi, kubonakala ngathi uBukayo Saka akatshatanga (ngexesha lokubhalwa). Siyazi ukuba ngenxa yokungaxolelwa kwibhola ekhatywayo ye-English, uSapho kufuneka akhethe ukugxila kwimisebenzi yakhe kunokujonga intombi okanye umntu oza kuba ngumfazi wakhe.
Okwalo mzuzu, singatsho ukuba uShaka wenze umzamo wokuphepha ukuphepha ukubonakala kwendawo yakhe yabucala. Le nyaniso yenza kube nzima kwiiblogger ezinje ngathi ukufumana ulwazi ngobomi bakhe bothando kunye nembali yokuthandana. Nangona kunjalo, kusenokwenzeka ukuba angaba nentombi kodwa akhethe ukungayibeki esidlangalaleni, ubuncinci okwangoku.
I-Bukayo Saka yabantwana Ibali leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNgokuhlwa- Ubomi bomntu
Ukwazi iinyani zikaBukayo Saka buqu kuya kukunceda ufumane umfanekiso ongcono wobuntu bakhe ngokudibeneyo kwimicimbi yebhola.
I-Bukayo Saka Iinkcukacha zoBomi bobuqu. Ityala kwi-Twitter
Ukudibana naye, uyakuqonda ukuba uBukayo Saka uhlala kwaye usebenzisa indlela yendlela yokuphila ubomi obucwangcisiweyo. Kwakhona, ungumntu onobuhlobo kakhulu kwaye ongezantsi emhlabeni ofumana evulekileyo kubalandeli kakhulu. Ngelixa kuqeqesho, unika ingqalelo kwezona zincinci iinkcukacha kwaye uqinisekisa ukuba akukho nto ishiyekileyo.
Emuva eNigeria kunye nase-United Kingdom, abahlobo bakaBukayo Saka kunye nabemi belizwe bambona njengobutyebi besizwe obufanele ukukhuselwa ngazo zonke iindleko. Jonga ividiyo apha ngezantsi.
I-Bukayo Saka yabantwana Ibali leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNgokuhlwa- Ubomi Bentsapho
U-Bukayo Saka uyaziqhenya ngobukhokho bakhe kunye neengcambu zaseNigeria kokubini kumaxesha amnandi namabi. Njenge Umondli, uyonwabele into yokuba azenzele usapho lakhe indlela eya kwinkululeko yezemali zebhola.
Bukayo Saka Amalungu osapho kunye nezihlobo; Umama wakhe, utata, abantakwabo, oodadewabo, oomalume, oomalume, njalo njalo, ngoku bavuna izibonelelo zokuba nezinto zabo ezinqabileyo kwimicimbi yebhola yeNgesi. Okwangoku, aI-ll yamalungu osapho kunye nezihlobo banayo yonke wenze ukhetho oluqinisekileyo lokuba angafuni ukwamkelwa luluntu nangona zininzi iindlela zokunxibelelana neendaba zosasazo.
I-Bukayo Saka yabantwana Ibali leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNgokuhlwa- LifeStyle
Ukusebenza kwilizwi nasekuzonwabiseni ziindawo ezimbini ezahlukeneyo zeBukayo Saka ngokwendlela yakhe yokuphila. Nangona ekholelwa ukwenza imali kwibhola ekhatywayo iyimfuneko, kodwa ukusekelwa kwakhe ngokuqinileyo kumncedile ukugcina iimali zakhe zitshekishwa kwaye zilungelelaniswe.
Njengakwelo xesha lokubhala, uBukayo Saka akavumelekanga ukuba aphile ubomi obuphawuleka ngokulula ngesandla ziimoto ezinamaxabiso aphezulu, izindlu njl njl.
UBukayo Saka Indlela yokuphila- Uyindlela yokuthintela iingxaki ekuhlaleni
Kwilizwe lanamhlanje lebhola ezinemoto ezihanyazayo kunye neeposti ezininzi zemithombo yeendaba zibonisa ubutyebi kunye neendlela zokuphila ezibizayo, singatsho ukuba uBukayo Saka yinto yokuhlaziya.
I-Bukayo Saka yabantwana Ibali leNqanaba leNgcaciso yeBantwana yaNgokuhlwa- Inyaniso engekho
Yayingenguye kuphela amaNigeria kwiAkhademi: IArsenal FC Academy iyakhawuleza ukuba likhaya kubadlali abaninzi baseNigeria. Mvanje ukusukela ngexesha lokubhalwa, i-academy inikezela ngeetharali zokufunda kwiitalente ezine ezithembisayo zaseNigeria - Ukusuka ekhohlo uye ekunene kubandakanya u-Arthur Okonkwo, u-Armstrong Okoflex, uJames Olayinka kunye no-Xavier Amaechi.
Ezinye iinkwenkwezi zaseNigeria kwiAkhademi. Ityala kwi Ilanga, BBC, IArsenalCore kunye Flickr
Inkolo: Njengoko kubonwe ngezantsi, incwadi yakhe ye-Instagram ifundeka ngolu hlobo "Umntwana kaThixo"Kwaye le nkcazo iyafana naleyo yeqela lakhe uJoe Willock. Kithina, kukho amathuba aphezulu okuba inkolo ka-Bukayo Saka yinkolo yobuKristu.
Inkolo ka-Bukayo Saka-Icacisiwe. Ikhredithi kwi-IG
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu leBukayo Saka Childhood Ibali kunye ne-Untold Biography Facts. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
I-Adebayo Akinfenwa Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
UMichael Keane Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts